Maxaa Lagaga Hadlay Shirkii gollaha Wasiiradda Jubbaland? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Maxaa Lagaga Hadlay Shirkii gollaha Wasiiradda Jubbaland?
Maxaa Lagaga Hadlay Shirkii gollaha Wasiiradda Jubbaland?
October 3, 2019 - By: Omar Akhyaar
Shirka gollaha wasiiradda Jubbaland oo uu shir gudoomiyay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Ayaa lagaga hadlay xaalada amaanka deegaanada Jubbaland iyo sidii loo dardar galin lahaa howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, waxaa kaloo lagaga hadlay waxbarashada, Adeegyada asaasiga ah, tayada shidaalka iyo arday deeqo waxbarasho loogu diray dalka dibadiisa.
Waxaa golahu uu ka dooday dardar galinta adeegyada garsoorka iyadoo Wasaarada Cadaalada iyo garsoorka ay ka warbixisay hanaanka dib u dhiska Xabsiyada Jubbaland gaar ahaan Xabsiga dhexe ee Magaalada Kismaayo oo dhismahiisu uu dhawaan bilaabanayo isla markana lacagtii ku bixi lahayd la diyaariyay.
Waxaa kale oo Wasaaradu ay sheegtay in Waxbarasho dibada ah dhawaan loo dirayo 12 Arday oo soo baranaysa sharciga iyo arimaha garsoorka iyadoo kuwo Waxbarashada soo dhamaystayna ay dib ugu soo noqonayaan Jubbaland dhawaan.
Wasaarada Xanaanada xoolaha ayaa laga dhagaystay Warbixin ku saabsan hanaanka talaalka xoolaha nool oo maraysa meel wanaagsan isla markana hada uu socdo talaalka in ka badan Sideed Milyan oo xoolo nool ah kuwaas oo laga hirgalinayo dhamaan deegaanada Jubbaland.
Golaha Wasiiradu waxaa kale oo ay ka doodeen hanaanka biyo galinta Magaalada Kismaayo iyo gaadhsiinta biyaha nadiifta ah deegaano kale oo katirsan Jubbaland waxaana howsha biyo galinta Magaalada Kismaayo ay marayso gaba gabo.
Golaha Xukuumada Jubbaland waxaa ay sidoo kale kulankooda maanta kaga hadleen tayada shidaalka laga isticmaalo deegaanada Jubbaland iyadoo marar qaar ay sababto in ay xumaadan gawaarida cilado ka jira tayada shidaalka darteed Xukuumadu waxaa ay soo jeedisay in aad loo hubiyo tayada shidaalka ay soo iibsanayaan dadka ree Jubbaland.
Adeegyada korantada ayaa sidoo kale golahu uu ka dooday saamaynta ka dhasha qalabka ay shirkadaha korantada isticmaalan oo khatar ku ah bad qabka Bulshada waxaana golahu uu isku raacay in tayada agabka ay shirkadahu isticmaalan ay noqdaan kuwo la hubiyay oo wixii dhibaato ah oo kasoo gaadha dadka shacabka ah ay qaadayaan shirkadaha korantada.